အရိပ် Fight3| APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » အရိပ်3Fight
အရိပ်3APK ကို Fight
အဆုံးမဲ့တိုက်ခိုက်ရေးနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်လုပ်ဆောင်ချက်ဤလောကသို့ငုပ်ယူပါ! အရိပ်3Fight အခမဲ့-to-play စသည်နှင့် 100% အသုံးပြုသူ-friendly ။ အခုသင့်ရဲ့စွန့်စားမှု Start, စစ်သည်တော်!
- ကစားသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားတဲ့လမ်းထဲသို့3ကွဲပြားခြားနားသောတိုက်ပွဲများစတိုင်များပေါင်းစပ်။
အဆိုပါ update ကိုအောက်ပါအပြောင်းအလဲများကိုလည်းပါဝင်သည်:
- အတည်သတ်မှတ်ထားတဲ့တချို့ကဝေဖန် bug တွေ,
- main Quest အပေါ်သွားသည်: အခန်း VII ၏ပထမအစိတ်အပိုင်းကိုနောက်ဆုံးတော့မရရှိနိုင်ပါ!
- နယူးအင်္ဂါရပ်: စုစည်းမှုများ။ သငျသညျလျင်မြန်စွာသင့်ရဲ့ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက်ခွဲပြီးနှင့်ပြီးစီးခဲ့တိုင်းစုဆောင်းခြင်းများအတွက်ဆုလာဘ်ရယူနိုင်တယ်,
-3ဒဏ္ဍာရီစုံအပြည့်အဝငျသညျဇာတ်ကောင်အပေါ်တပ်ဆင်ထားအခါ, သူတို့တစ်ဦးစီတဦးတည်းသင်တစ်ဦးကိုအထူးရန်ပွဲဆုကြေးငွေကိုပေးသည်။
98.71 ကို MB